Real Madrid oo Isha ku heysa Daafac Chelsea u ciyaara, Waa kee?
Wednesday, March 20th, 2019 - 16:15:54
Tuesday June 12, 2018 - 14:34:31 in Wararka by
Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa kalsooni ku qaba inuu lasoo saxiixan karo daafac dambeedka bidix ee reer Spain iyo kooxda Chelsea Marcos Alonso inta lagu gudi jiro suuqa xagaaga.
27 jirkan reer Spain ayaa qaab ciyaareed cajiib ah kusoo bandhigay kooxda reer London ee Chelsea tan iyo markii uu yimid sanadii 2016.
Marcos Alonso ayaa kaga soo dhaqaaqay kooxda Chelsea dhigeeda reer talyaani ee Fiorentina, wuxuuna ka caawiyay inuu kula guuleysto horyaalka Premier League iyo FA Cup.
Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa lala xiriirinayaa inay si aad ah u daneenayaan saxiixa difaaca kooxda Chelsea Marcos Alonso suuqan xagaaga, laakiin Los Blancos ayaa la fahansan yahay in loolanka ay ku gacan sareyso.
Madax weynaha kooxda Florentino Perez ayaa la tilmaamayaa inuusan ku qanacsaneen heerka difaaca ay bixisay kooxda Real Madrd, sidaas daraadeed wuxuu ku adkeesanayaa inuu lasoo saxiixdo Marcos Alonso.
Milkiilaha kooxda Chelsea ee reer Russia Roman Abramovich ayay wararku xaqiijinayaan inuusan diidi doonin hadii uu Marcos Alonso ka baxayo Blues suuqa xagaaga, Real Madrid ayaa kalsooni ku qabta inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka.